Mushaharka ugu yar ee Germany 2021
Mushaharka ugu yar ee Germany 2021 qadarku wuxuu noqday mid ka mid ah mawduucyada uu qof kastaa xiiseeyo.
Mushaharka ugu yar waa hab-dhaqan qeexaya mushaharka ugu yar ee qof kasta oo ka shaqeeya waddan uu heli karo. Dhaqankan, oo laga hirgeliyay wadamo badan oo Yurub ah, loo-shaqeeyayaasha waxaa laga ilaaliyaa in la siiyo mushahar aad uga hooseeya shaqadooda, waxaana la ilaaliyaa xuquuqda shaqaalaha. Jarmalku waa waddan mararka qaarkood shaqaale qora. Sababtuna waa yaraanta dhalinyarada dalka ka shaqayn karta. Sababtan awgeed, tirada dadka ku riyoonaya inay ka shaqeeyaan oo ku noolaadaan Jarmalka ayaa si aad ah u kordhay sannadihii u dambeeyay.
Waa maxay Celceliska Mushaharka Jarmalka?
Isagoo ka hadlaya xirfadaha Celceliska mushaharka Jarmalka ku dhawaad ​​2.000 Euro (laba kun oo Yuuro) ayaa ku dhow. mushaharka ugu yar ee jarmalkaHaddii lacagta 2021 ay tahay 1614 euros ayaa la go'aamiyay. Lacagtani waxay la mid tahay qiyaastii 9,5 Euro saacaddii. Lacagtan, Jarmalku wuxuu galay kaalinta 5aad ee xubnaha Midowga Yurub. Mushaharka ugu yar ee Jarmalka Markaad ka fikirto dadka la shaqeeya dadka, waxaa maskaxdaada ku soo dhacaya shaqooyin aan xirfad lahayn. Tirada shaqooyinkan runtii aad bay u yar yihiin.
Kaliya 2% dadweynaha ayaa ku shaqeeya mushaharka ugu yar. Xitaa kooxaha xirfadaha ee maskaxda ku soo dhaca sida shaqooyinka aan xirfadda lahayn sida shaqaalaha warshadaha, mudalabyada, qadarka mushaharku wuxuu ka sarreeyaa mushaharka ugu yar. Mar labaad, haddii ay lagama maarmaan tahay in la sameeyo qiimeyn ku saabsan mushaharka ugu yar, waxaa suurtagal ah in si raaxo leh loogu noolaado mushaharka ugu yar ee Jarmalka. Qadarkan, waxaa suurtogal ah in lagu bixiyo dhammaan guryaha, cuntada iyo cabitaanka, gaadiidka iyo baahida isgaarsiinta ee qofku u baahan yahay inuu sii wato noloshiisa.
Tusaale ahaan, celceliska dukaamada cuntada ee qofka ku nool Jarmalka waa ku dhawaad ​​150 Euro. Dabcan, lacagtani way kala duwanaan kartaa iyadoo ku xidhan hadba inta iyo nooca alaabta aad soo iibsato, laakiin waxaa suurtogal ah in qofku uu wax ka iibsado bil gudaheed, oo ay ku jiraan hilibka cas, hilibka cad iyo kalluunka, qadarkaas. Mar labaad, qofka ku nool Jarmalka, qiimaha kirada bishii wuxuu noqon doonaa ku dhawaad ​​600-650 Yuuro. Xitaa marka kharashaadka jikada, gaadiidka, isgaarsiinta iyo kharashyada kale lagu daro, mushaharka 1584 Euro ayaa ku filan inuu daboolo dhammaan baahiyaha qofka. Xataa hawlaha uu qofku ka qaybqaadan karo xoogaa lacag ah ayaa u hadhi doona kaydka.
Waa maxay Farqiga Mushaharka u dhexeeya Jarmalka iyo Turkiga?
Waa maxay Farqiga Mushaharka ugu Yar ee u dhexeeya Turkiga iyo Jarmalka Haddii aad waydiiso, waxaanu samayn karnaa isbarbardhig sidan oo kale ah. Tusaale ahaan, Jarmalka, baahiyaha aasaasiga ah waxaa lagu daboolaa 1000 Euro bishii. Iyadoo la tixgelinayo in mushaharka ugu yar ee Jarmalku yahay 2021 Euros sanadka 1640, 600 ee soo hadhay ee Euros waxaa lagu iibsan karaa wax aan muhiim ahayn, tusaale ahaan baahida raaxada, ama inta ka hartay mushaharka ugu yar ayaa loo dhigi karaa kayd.
Halkee looga Shaqeeyaa Mushaharka Ugu Yar ee Jarmalka?
Mushaharka ugu yar ee Jarmalka ayaa laga kordhiyey €2020 ilaa €2021 intii lagu jiray kala guurka 1,584.0 ilaa 1,614.0. Iyadoo arrintu sidaas tahay, haddana tirada dadka ka shaqeeya mushaharka ugu yar ee dalka ayaa xaddidan. Sababtoo ah mushaharka lagu taliyey ee inta badan xirfadaha ayaa ka sarreeya mushaharka ugu yar. Tusaale ahaan, mushaharka shaqaalaha warshadu waa ku dhawaad ​​3000 oo Yuuro. Mar labaad, mushaharka shaqaalaha daryeelka bukaanka iyo waayeelka, kuwaas oo ka mid ah kooxaha shaqada ugu mushaharka yar ee Jarmalka, waa ku dhawaad ​​3000 Euros.
Celceliska mushaharka JARMALKA
# Mushaharka ugu yar ee Germany 2021
# Waa maxay Celceliska Mushaharka Jarmalka?
# Waa maxay Farqiga Mushaharka u dhexeeya Jarmalka iyo Turkiga?
# Halkee looga Shaqeeyaa Mushaharka Ugu Yar ee Jarmalka?
Tags: mushaharka ugu yar ee Jarmalka, mushaharka ugu yar ee Germany, Waa maxay mushaharka ugu yar ee Jarmalka?, waa imisa mushaharka ugu yar ee Jarmalka, waa maxay mushaharka ugu yar ee Jarmalka